Qalad 0x80070141: waxaad u baahan tahay inaad ogaato | Madasha Mobile
Khalad 0x80070141: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Waxaa jira dad badan oo isticmaala Windows kuwaas oo waligood ku lahaa isaga qalad 0x80070141, oo ay la socoto farriin welwel leh: Aaladda lama hayo (Aaladda lama gaadhi karo Ingiriisiga).
Inta badan, qaladkani wuxuu soo baxaa markaan isku dayno inaan fulino falalka qaarkood. Tusaale ahaan, markaan isku dayno inaan furno, nuqulno ama ka rarno faylka JPEG kamaradda taleefanka gacanta kombiyuutarka, inkasta oo laga yaabo inay sidoo kale ka muuqato duruufo kale.
Dhab ahaantii, qaladka 0x80070141 waa qalad nidaam oo soo noqnoqda marar badan marka aan ku xirno qalabkayaga aalado gaar ah. The iPhones 6/7/8 / X / XS iyo XR waa qaar ka mid ah. Laakiin caddaalad ma noqon doonto in loo tilmaamo iPhones sidan, ugu yaraan maahan mid gaar ah. Mararka qaarkood waxaan la kulmi karnaa dhibaato isku mid ah qaarkood Jilayaasha Android sida summadaha Samsung Galaxy ama Lenovo. Mar kasta oo caqabad weyn ay timaaddo marka faylasha loo wareejinayo PC-ga, shaashaddayada waxaa ka soo bixi doona farriinta caanka ah ee “Aaladda lama heli karo”.
In kasta oo tani ay tahay tan ugu badan, haddana koodhka qaladka ee dhibsada 0x80070141 ayaa sidoo kale u muuqan kara ujeedooyin kale. Tusaale ahaan, marka uu jiro qalab waxyeelloobay ama darawalada si khaldan loo rakibay. Ama marka qalabkayaga uu saameeyo nooc fayrus ah.
Waa in lagu daraa taas dhibaatadani kuma koobna nooc gaar ah oo Windows ahWaxaa lagu diiwaan geliyey noocyada 7, 81 iyo 10. Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo badan oo lagu hagaajin karo.
1 Maxay qalad 0x80070141 u dhacdaa?
2 Xallinta qaladka 0x80070141
2.1 Ku rakib dhammaan cusbooneysiinta Windows
2.2 Qalabaynta Qalabka iyo Qalabka
2.3 Adeegso deked USB oo ka duwan
2.4 Gaabi magaca faylka
2.5 Ku xir sidii aalad warbaahineed (MTP)
Maxay qalad 0x80070141 u dhacdaa?
Maxay qalad 0x80070141 u dhacdaa? Waxaan falanqeynaynaa sababaha iyo xalalka suurtagalka ah
Markaan soo koobno ​​wax kasta oo soo ifbaxay ilaa hadda, waxaan dhihi karnaa qaladka 0x80070141 wuxuu u dhici karaa sababo kala duwan iyo sababo kala duwan awgood. Si guud markaan u hadalno, waa dhibaato is -waafajin, inkasta oo ay sidoo kale sababi karto cillad, guud ahaan ahmiyad yar, oo aan awoodnay inaan iska indha -tirno.
Kani waa liis yar oo ka mid ah sababaha suurtagalka ah khaladkan:
Diiwaanka aad u weyn. Windows kuma shaqayn karto faylasha magac ama waddo dhaafa 256 xaraf.
Khalad File Explorer. Xaalado badan oo la soo sheegay waxaa jira guuldaro ku jirta sahamiyaha faylka kaas oo ka horjoogsanaya inuu xiriir joogto ah la yeesho nooc kasta oo ah qalabka kaydinta dibadda, sida taleefanka gacanta.
Microsoft Hotfix wuxuu u baahan yahay in la rakibo. Khaladka 0x80070141 ayaa la ogaadey iyada oo ay jiraan dhacdooyin badan Windows 10, sidaa darteed Microsoft waxay go'aansatay inay siideyso hotfix (ama balastar) si loo xaliyo dhibaatadan.
Dekedda USB ee khaldan.
Wareejinta borotokoolka aan ahayn MTP. Haddii aan isku dayeyno inaan ka nuqulno faylasha aaladda Android, waxaa laga yaabaa inay khaladku dhacayaan sababta oo ah borotokoolka wareejinta looma habeynin sida MTP.
Kuwani waa kaliya sababaha ugu badan uguna caansan ee sharxaya joogitaanka qaladka xanaaqa ee 0x80070141 kombiyuutarradayada, in kasta oo ay jiraan kuwo kaloo badan. Marka xigta waxaan wax ka qaban doonnaa waa maxay hababka ugu waxtarka badan ee lagu xallin karo.
Xallinta qaladka 0x80070141
Dhammaan hababka aan hoos ku taxayno ayaa si siman waxtar u leh si loo gaaro ujeeddada xallinta khaladka uu qoraalkani ka hadlayo. Si kastaba ha ahaatee, waxtarkiisu wuxuu noqon doonaa mid sarreeya ama ka hooseeya iyadoo ku xiran asalka dhibaatada. Habka wanaagsan ee su'aashan loo wajaho waa in mid kasta oo iyaga ka mid ah loo tijaabiyo siday u kala horreeyaan.
Ku rakib dhammaan cusbooneysiinta Windows
Cusboonaysii Windows si loo xaliyo qaladka 0x80070141
Kahor intaadan isku dayin xal kale, waxaa mudan in la hubiyo in Windows horeyba u siisay xalka dhibaatadaada, maadaama ay hubaal tahay inay durba heshay warbixinno badan oo ka yimid isticmaaleyaal kale. Tani run ma aha oo kaliya khaladkan gaarka ah, laakiin inta badan dhammaan khaladaadka dhici kara.
Xalku wuxuu ku yimaadaa qaab balastar (hotfix) waxaana si toos ah looga hirgeliyaa kombiyuutarkeena kadib markii la rakibay casriyeyntii ugu dambeysay ee Microsoft. Xusuusnow inaad dib u bilowdo kumbuyuutarkaaga cusboonaysiinta ka dib si wax walba si caadi ah u shaqeeyaan sidaasna lagu macsalaameeyo qaladkan dhibsaday.
Qalabaynta Qalabka iyo Qalabka
Xallinta qaladka 0x80070141 oo leh Dhibaatooyinka Qalabyada Windows iyo Qalabka.
Mid ka mid ah sababaha ugu badan ee qaladkan keena waa kan aan ku soo xusnay liiskii hore: a Shilka Faylka Explorer taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in nidaamka qalliinku samaysto xidhiidh deggan oo leh qalab kaydinta dibadda ah. Nasiib wanaag, marar badan Windows waxaad ku xalin kartaa dhibka hababkaaga.
Habka si fudud wuxuu ka kooban yahay maamula dhibka Hardware -ka iyo Qalabka. Sidan, nidaamku wuxuu baari doonaa aaladda ku xiran, qiimeyn doonaa xaaladda wuxuuna ugu dambayn ku talin doonaa xal suurtagal ah. Waa tan sida loo sii wado, afar tallaabo oo fudud:
Waxaan riixnaa furayaasha Windows + R si aan u furno daaqadda "run". Sanduuqa qoraalka waxaan ku qornaa "Ms-settings: mushkilad" oo riix Enter. Iyadoo tan la furi doono daaqadda "Dhibaatooyinka".
Dhexdeeda, waxaan ku eegi doonaa xagga hoose ikhtiyaarka "Raadi oo hagaaji dhibaatooyinka kale" (midka lagu muujiyey astaanta furaha) oo guji "Qalabka iyo qalabka".
Markaas ayaan gujineynaa "Orod baadi -goobka" ee menu macnaha guud ee muuqda. Geedi socodku wuxuu qaadan karaa dhowr ilbidhiqsi iyo xitaa daqiiqado.
Ugu dambayn, daaqadaha ayaa na siin doona a xal. Mabda 'ahaan, mid ku habboon nooca dhibka ina haysta. Si aan u aqbalno oo u bilowno, waa inaan riixnaa "Codso".
Si xalku u hirgalo waxay noqon doontaa lama huraan Dib u bilaw kumbuyuutarkaaga. Haddii dhibaatadu sii socoto oo qaladka 0x80070141 uu sii muuqdo shaashadda, waa inaan isku daynaa habka soo socda.
Adeegso deked USB oo ka duwan
Dekedaha USB ee laptop
Waxaa jira waqtiyo aan ku waalano raadinta asalka dhibaatada, isku dayo xallinta ugu adag. Kadibna waxaan ogaannay in sida loo xallin karo ay ka sahlan tahay sidii aan moodaynay. Xaaladda qaladka 0x80070141 waxaa laga yaabaa inay ku jirto Dekada USB.
Dhacdadani aad bay u badan tahay sida dadku u malaynayaan. Badanaa, mid ka mid ah dekadaha isku xirka si sax ah looma xiriirin (taasina waxay abuurtaa khaladka). Waxa kale oo dhici karta in dekedda kombiyuutarkeenna ee aannu ku xidhnay aaladda dibadda aanay lahayn awood ku filan oo ay ku taageerto gudbinta.
Laakiin ka digtoonow, mararka qaarkood guuldarradu waxay u dhici kartaa si ka soo horjeedda: deked USB 3.0 ah ayaa laga yaabaa inaysan ku habboonayn isku xirnaanta aaladaha aan lahayn darawalada lagama maarmaanka u ah inay ka shaqeeyaan iskuxirka USB -ga.
Xalka kiisaskaan waa macquul macquul ah: waa inaad ka furtaa aaladda dekadda USB iyo ku xidh deked kale. Waa hubaal ka dib markaan samayno oo hubinno inay shaqayso, waxaan ka fikiri doonaa "sidee hore iigu dhici weyday?"
Gaabi magaca faylka
Waxay xal fiican u noqon kartaa dhibaatada. Waana dhacdooyinka qaarkood sababta sababta qaladkani u dhacayo waa daaqadaha oo isku dayaya inay maamulaan faylka magac aad u dheer. Haddii aan si dhow u fiirino, marar badan waxaan la shaqeynaa faylal leh xarfo iyo tirooyin aan dhammaad lahayn oo magacooda ku jira.
Hadday taasi tahay dhibaatada, ma jirto wax laga walwalo, maadaama xalku yahay mid deg -deg ah sida fudud. Waxaa ku filan in la beddelo magaca faylka su'aasha ku jira. Hadafku ma aha inuu dhaafo xadka xarafka 256. Haddaba sida loo soo gaabiyo magaca faylka? Waxaan ku gujin doonaa badhanka midigta midig oo dooro ikhtiyaarka "Dib u magacow".
Haddii tani sabab u ahayd qaladka, magaca oo la soo gaabiyo waa la xallin lahaa.
Ku xir sidii aalad warbaahineed (MTP)
Isku xirka aaladda warbaahinta (MTP) ayaa laga yaabaa inay xal u tahay qaladka 0x80070141
Waxaa jira kiis caadi ah oo qaladku ka muuqdo 0x80070141. Waxay dhacdaa markaad isku daydo nuqul ka samayso aaladda Android una wareejiso kombiyuutarka Windows. Xaaladahan gaarka ah, borotokoolka wareejinta ayaa si khaldan u fasiraya in kamarad ku xidhan tahay. Kani waa kiiska dhammaadka liiska aan kor ku soo bandhignay oo ku saabsan sababaha ugu badan ee khaladaadka. Si aan uga gudubno carqaladdan waa inaan ku dhaqaaqnaa hab -maamuuska wareejinta warbaahinta (Borotokoolka Wareejinta Warbaahinta ama MTP).
Loo sharxay hab aad u aasaasi ah, the MTP Waa midda gacanta ku haysa in moobilka loo rogo aalad warbaahin badan oo kombiyuutar ah. Hawshiisu waa muhiim, maadaama ay noo oggolaanayso inaan ka helno faylasha muusikada, duubista maqalka, fiidiyaha iyo sawirrada moobiilka PC -ga.
Marka qaladka la helo, waxaan hore u haysannay xalka. Tani waxay ka kooban tahay beddelidda borotokoolka wareejinta oo sidaas “indhahayaga ugu furaya” kombiyuutarkeena. Si aan u fulinno hawlgalkan waa inaan ku dul wareejinnaa tilmaameha dusha sare ee shaashadda, si aan u aragno faahfaahinta xiriirkayaga USB ee hadda jira. Liiska soo muuqda, waa inaan si fudud ku qasbannahay dooro Qalabka Warbaahinta (MTP). Tani waxay xallin doontaa khaladka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Nidaamyada hawlgalka » Windows » Khalad 0x80070141: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Ma mudan tahay inaad iibsato Nintendo Switch sanadka 2021?
Toddobada anime ee ugu wanaagsan Hulu hadda waa la heli karaa